Miandrandra ny fihaonana aminao ao amin'ny ICBE 2020!
Mianara bebe kokoa momba ny TronHoo ao amin'ny Booth Trade Trade E-varotra Iraisam-pirenena any amin'ny taona 2020 No. 2A512 Hall 2 2020.9.2-4, Centre Convention and Exhibition any China, Sina Manantena hihaona aminao!
Mandrapihaona amin'ny 3D Pirinty natao tamin'ny Shenzhen 2020!
Mianara bebe kokoa momba ny TronHoo ao amin'ny 3D Print Shenzhen Booth No. 2020 .: Efitrano 2A512 2 2020.9.2-4, Foibe Fifanarahana & Fampirantiana any Shenzhen, Sina Manantena hihaona aminao!
Mandrapihaona amin'ny CEE 2020!
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-05-21
Mianara bebe kokoa momba ny TronHoo ao amin'ny CEE 2020 Booth No .: 1293-1295 Hall A 2020.6.30-7.2 Beijing Etrong International & Convention Center, Sina Manantena hihaona aminao!
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-05-18
NY EXPO électronics CONSUMER INTERNATIONAL INTERNATIONAL 19èè izay mianatra bebe kokoa momba ny TronHoo ao amin'ny CEE 2020 Booth No .: 1293-1295 Hall A 2020.6.30-7.2 Beijing Etrong International & Convention Center, Sina
Izahay no tsara indrindra!
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-05-05
TronHoo dia nanao fiofanana tery ivelany tamin'ny 30 aprily. Ny fanahin'ny fiaraha-miasa, ny voninahitra, ny fankasitrahana ary ny andraikitra dia mihazakazaka mandritra ny fotoana rehetra. Ny mpiasa rehetra dia nandresy ny fanamby tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa ary koa ny fahafenoana. ...
Nohavaozina izao ny tranokala TronHoo!
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-04-28